पर्वतमा आइया पनि भन्न नपाइ भयो ५ जनाको मृत्यु – Classic Khabar
यहाँका विभिन्न ठाउँमा पहिराले पु’रिँदा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ भने तीन जना पुरिएर बे’पत्ता भएका छन् । गए रातिको भीषण वर्षापछि पहिरो जाँदा कुश्मा नगरपालिका–३ दुर्लुङमा पाँच जना पु’रि’एकामा दुई मृतावस्थामा फेला परेका छन् ।
पहिरामा पु’रिएका एकै घरका पाँच जनामध्ये १५ वर्षीया विमला पौडेल र ११ वर्षीया विनिता पौडेलको शव निकालिएको छ । घरका तीन बे’पत्ता रहेको हुनाले खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै कुश्मा नगरपालिका–११ पकुवामा पहिरामा पु’रिएका ३५ वर्षीया दुर्गा पौडेल र उनका छ वर्षीय छोरा गणेशको शव फेला परेको प्रहरी नायब उपरीक्षक बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । यस्तै मोदी गाउँपालिका–५ अम्बोटमा पहिरामा पुरिएर ५० वर्षीया ठुलीमाया थापाको मृत्यु भएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानमा पनि भीषण वर्षाका कारण क्षति भएको अनुमान गरिए पनि अहिलेसम्म पूर्ण विवरण नआएको प्रहरीले जनाएको छ ।
Prevसाबधान ! के तपाईको बच्चालाई यस्तो लक्षण त देखिएको छैन ? ज्यानसम्म पनि जान सक्ने
Nextबेपत्ता नेपाली खोज्न ड्रोन उडाउन नदिने भारतले बिना अनुमति निरन्तर हेलिकप्टर नेपाली आकाशमा ?